Hapana nyowani AirPods Pro kusvika 2022 | Ndinobva mac
Hapana itsva AirPods Pro kusvika 2022
Nepo chizvarwa chechipiri AirPods chave kugadzirira kuratidzwa mukati megore rino ra2021, iyo AirPods Pro inoita kunge inogona kutora chinguva chidiki kuti vaone mwenje. Anonyatso kuzivikanwa muongorori weApple Ming-Chi Kuo, inotsanangura mumushumo wayo wapfuura kuti iyo Cupertino femu haizovhura mamodheru matsva eAirPods Pro kusvika gore rinouya
Ehe saizvozvo runyerekupe rwanga rwuchishomeka pane izvi Uye kunyange zvichiri mangwanani-ngwanani kuti Apple haina kuvandudzwa kwemahedhifoni asina waya akarongerwa gore rino, zvinokwanisika kuti pakupedzisira zvichadaro.
Mwanakomana zvakasiyana zvinoreva izvoiwe wakaburitsa mishumo yemuongorori anozivikanwa nezve zvinogona kuburitswa kweAirPods Pro ye2022. Zvinoita sekunge gore rino tichazobuda muchizvarwa chechipiri chePro asi kana tichizenge tine nyowani nyowani. yemhando yekutanga maAirPod, mune ino kesi kune kutaura kwemahedhifoni ane dhizaini yakafanana neiyo AirPods Pro.
Icho chokwadi ndechekuti Apple mahedhifoni ari kuona shanduko pamwe neazvino kuburitswa kweBeats Studio Buds (iyo isati ichiri kutengeswa) uye inopfuura mamwe matsva echipiri-chizvarwa AirPods. Muongorori anowedzera kutsanangura izvo Aya Apple anotangisa anomiririra shanduko munzira iyo vashandisi veApple vanotenga zvigadzirwa uye vasiri-vashandisi, asi mune ino pfungwa izvo isu tine chokwadi chekuti inofarira iyo kambani neakarumwa apuro ndeyekuti akawanda madhizaini sezvinobvira anotengwa.
Sekureva kwaKoo, iyo Cupertino femu ichauya mukota ino yegore ingangoita mamirioni mashanu mahedhifoni mashoma ichideredza fungidziro dzayo dzekutanga dze75 mamirioni mayuniti kusvika mamirioni makumi manomwe Iyo nhamba iyo ichiri yakanyanya kukwirira uye ichichengeta Bel munzvimbo dzepamusoro dzekutengesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Hapana itsva AirPods Pro kusvika 2022
Nomad Yakakomberedzwa Pamusoro peGomo reMhepoTags